Nabaad Guurka Dhirta “xaalufka dhirta” - Diblomaasi
Sanadadii ugu danbaysay waxaa jiray xaaluf aad u xun kaasoo loo gaysanaayay deegaanka soomaaliyeed sida: Dhirta, badda iyo beerihii soomaliyeed oo caanka ku ahayd. Sida aan ka warhayno mudooyinkii danbe waxaa jiray dib udhac ku yimid wadankeena hooyo. Waxaana lajaray dhirtii soomaaliyeed iyadoo laga leeyahay ujeedooyin gaara. Waxaana ugu weyn ganacsiga iwm mida kale waxaa lagu bay dhirtii soomaaliyeed iyagoo la xaalufiyay gabi ahaanba dhirtaas.
Geedkaan saad ku aragto waxaa dab la saaray dhir meel ku taala, kadibna uu geedkii gabi ahaanba gubtay sida aad sawirkaan ku aragto. Balse kan waa geed keli ah, waxaa jira geedo ama kaymo ay ah oo ay gubaan dadka wax magaradka ah iyagoo dan ka lahayn gubashada geedaha iwm.
Duulkaan waxay gubeen geedo aad ubadan oo hal meel kuwada yaal, waxaana halkaa ku basbeelay nooleyaal aad ubadan oo isugu jira dhir iyo cayayaan.
Xaalufka ugu daran ee soogaara dhirteena waa gubida dhuxusha iwm. Taasoo ah musiibo qaran oo asiibta deegaanka. Dhulka soomaaliyeed waa dhul leh khayraad aad ubadan oo ay ka mid yihiin dhirta iwm. Haddii dhirtana lagubo maxaa ku dhacaya noolayaasha ku tiirsan geedaha? Waxaa ku dhacaya in uu dabar go’o waayo haddaan dhirta ladaba qaban waxaa dhacaya masiibo ku dhacda bay’ada.
Dadka ayaa uguba geedka in ay ka helaan dhuxul taasoo ay ka helaan dhaqaale. Balse dad badan ayaa aaminsan in xitaa dhirta lagubayaa ay jiraan dad dano gaara leh ama dawlado ujeedooyin kale leh ay ku dadaalaan in ay xaalufiyaan dhulka soomaaliyeed iyagoo ka faa’idaysanaya dawlad la’aanta ka jirta dhulka soomaaliya.
Dhuxul (Charcoal) waa hadhaaga marka qidcad dhir ama xayawaan ka timid la gubo ka hor intaanay dambas noqon. Dhuxusha midabkeedu waa cowlaan madoow ah. Waana maxsuulka ka soo baxa marka alwaax ama qori la gubo ka dib la demiyo intaanu dambas noqon.
Heerkulka dabka lagu shidayo geedaha markuu gaadho 220C0 (428 °F) waxa soo baxa dhuxusha cowlan (Brown Charcoal). Haddii lagu sii wado dabka marka 280C0 (536 °F) wakhti ka dib waxaa soo baxa dhuxusha Madow (Black Charcoal). Ugu dambayn haddii 310C0 la gaadhsiiyo waxaa soo baxa dhuxusha Jilicsan.
Dhuxushu waxay ka samaysan tahay kaarboon qalalan oo wax biyo lahayn. Sababtoo ah kulka dabka lagu shiday qoryaha dhuxushu ka timid ayaa ka uumi bixiya biyaha.
Dhuxusha waxay ka mid tahay waxyaabaha qadiimiga ah ee dadku isticmaali jirey tan iyo qarniyo hore. Guud ahaan, dhuxusha waxaa loo isticmaalaa in laga sameeyo dab wax lagu karsado ama laga helo kuleyl. Maadaama dhuxushu ka timaado geedaha, waxay halis iyo khatar badan ku heeysaa jiritaanka dhirta. Si loo helo jawaan dhuxul ah waxaa la jaraa labo ama saddex geed, taas oo keenaysa in dhirtu si dhakhso badan u tafiir go’do.
Related Topics:Nabaad guurka dhirta “xaalufka dhirta”